द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | अप्रिल 11, 2020 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तपाईंले बोनस, प्रशिक्षण वा तलब वृद्धिको लागि आवेदन दिन योजना बनाउनु भएको छ। कार्य लिनु अघि, यसले तपाईंको कामलाई हाइलाइट गर्न लिने जे पनि गर्नुहोस्। यदि तपाइँ अरू भन्दा दुई गुणा बढी गर्नुहुन्छ, तर कसैलाई यसको बारेमा थाहा छैन। तपाईं आफ्नो समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले दैनिक रिपोर्ट लेख्न विचार गर्नु पर्छ।
दैनिक गतिविधि रिपोर्ट, के को लागी?
रोकथाम उपायहरूको बखत, तपाईंसँग तपाईंको पदानुक्रमको साथ सीधा सम्पर्क नहुन सक्छ। तपाईलाई सहकर्मी वा तपाईंको सुपरवाइजर बदल्न जबरजस्ती गर्न सकिन्छ। दैनिक गतिविधि रिपोर्ट लेख्दा तपाईंको कामको स्पष्ट तस्वीर दिनेछ। तपाईको सुपरिवेक्षणका लागि जिम्मेवार व्यक्ति (हरू) उनीहरूको निर्णय लिन यस कागजात प्रयोग गर्न सक्दछन्। तपाईको कामको आयोजन सबै सजिलो हुनेछ। यदि तपाईको मालिकलाई थाहा छ कि तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ के गर्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ। एक व्यक्तिले कल्पना गर्न सक्छ कि तपाईं यी सन्देशहरू वा उसको टेलिफोन कलहरूले धेरै कम विचलित हुनुहुनेछ।
उसको गतिविधि प्रतिवेदनमा के जानकारी समावेश गर्नुपर्छ?
यो सबै आवश्यक तत्वहरू, सबै जानकारीहरू ल्याउने सवाल हो जुन दिनको समयमा सम्पन्न भएका सम्पूर्ण कार्यहरूको अवलोकन गर्न सम्भव बनाउँदछ। काम सम्पन्न भयो, योजना गरिएको काम भयो, समस्याहरू सामना गर्यो साथ साथै ती समाधान गरियो। उसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ, तपाईको कार्यबाट प्रभावित सबैले जस्तै, सही दिशातर्फ जान। सबैलाई थाहा छ के भइरहेको छ र जब यो हुनेवाला छ, हामी धमिलो पार्दैनौं। यदि तपाईं सहि दिशामा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई बधाई दिनेछौं र यदि तपाईं गलत हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई द्रुत रूपमा बताउँछौं। कोहीले पनि तपाइँको काम लिन सक्नेछैनन्। यो कागजात तपाइँको वार्षिक साक्षात्कार को लागी आधारको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ, उदाहरण को लागी।
दैनिक रिपोर्ट संख्या १ को उदाहरण
यो पहिलो उदाहरणमा, एक टोली नेताले कार्यस्थलमा उनको पर्यवेक्षकलाई सूचित गर्दछ। ऊ आफैं १ 15 दिनको लागि घरमा फसेको छ। हरेक दिन उनी उसलाई पठाउँछिन् एक ईमेल दिनको अन्त्यमा। उनको प्रतिक्रियामा, उनको नेताले गल्ती गर्नबाट जोगिनु पर्छ र केहि समस्याहरू समाधान गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी समाधानहरू बताउँछ।
विषय: ० report/१15/२०२० को गतिविधि रिपोर्ट
उपकरण र उत्पाद सूची नियन्त्रण
कोभिड १। उपायहरूसँगको अनुपालन जाँच गर्न साइटबाट साइटमा यात्रा
सेवा घटना प्रबंधन
मेल र फोन कल व्यवस्थापन
प्रशिक्षण र नयाँ कर्मचारीहरूको मूल्यांकन
परिसर र सफाई उपकरणहरूको मर्मत गर्नुहोस्
नयाँ मार्गहरू योजना बनाउँदै र कारपुल आयोजना गर्दै
ग्राहक क्यान्भासिंगका लागि नयाँ प्रस्तावहरूको ड्राफ्टि।
व्यवस्थापन गर्नमा खराबीको संचार
सुरक्षा र स्वच्छता नियमहरूको सबै टीमहरूलाई सम्झाउनुहोस्
उत्पादन आदेश र यदि आवश्यक छ भने नयाँ अर्डरहरूको रसीद
भुक्तानी पर्ची तत्वहरू प्रसारण
टीम २ द्वारा पार्कि maintenance मर्मत र फोहर निपटान
तीन टोली नेताहरूसँग भेट
दैनिक रिपोर्ट संख्या २ को उदाहरण
यस दोस्रो उदाहरणमा, पेरिस क्षेत्रका डेलिभरी फेब्रिसले आफ्नो नयाँ शेफलाई हरेक दिन रिपोर्ट पठाउँदछ। उसले यो रिपोर्ट पन्ध्र पन्ध्रसम्म पठाउँनेछ। यस अवधिको अन्त्यमा, उनीहरूको बीचमा यसको नयाँ मिसनहरू परिभाषित गर्न नयाँ छलफल हुनेछ। र आशा छ, यसको नयाँ नेताको समर्थन बोनसको लागि।
रिड प्रतिबद्धता र व्यावसायिकता संयोजन गर्ने विनम्र सूत्रहरूको लागि रोज्नुहोस्
ट्रक मर्मतसम्भार: चेक, टायर प्रेशर, तेल परिवर्तन
COVID19 स्वास्थ्य जानकारी बैठक
यात्रा कार्यक्रमको संगठन
प्राथमिकता अर्डर तयारी
ट्रक लोड हुँदै
गोदामबाट बिहान :9: at० बजे प्रस्थान
ग्राहकहरूका घरहरूमा पार्सल डेलिभरी: १ deliver डेलिभरी
P बिहान गोदाममा फर्कनुहोस्
Undelivered प्याकेजको भण्डारण र अफिसमा ट्रान्जिट सल्लाह नोट फाइल गर्ने
ग्राहक उजुरीको प्रक्रिया, अस्वीकृत वा बिग्रिएको सामानको प्रक्रिया
उपकरणको सफाई र बाँकी टोलीसँग कीटाणुशोधन
यो अन्तिम उदाहरणको लागि, एक कम्प्युटर मर्मतकर्ता संक्षेपमा आफ्नो दिन-प्रतिदिन गतिविधिहरु मा आफ्नो श्रेष्ठ सूचित गर्दछ। घरमा गरिएको कार्यलाई निर्दिष्ट गरेर र त्यो ग्राहकमा गरिएको। कुनै खास समस्या छैन, कारावास को अवधि को बावजुद काम जारी छ।
विषय: ०//१15/२०२० को गतिविधि रिपोर्ट
:9: a० बिहान - १०::30० बिहान घर
गुइल्युमको साथ अन्तर्वार्ता राम्रा समाधानहरू बुझ्न हामी कम्पनीलाई XXXXXXXXX प्रस्ताव गर्नेछौं।
पहिलो विस्तृत अनुमानको ग्राहक सेवामा ड्राफ्टि and र ट्रान्सफर।
१०::10० बिहान - ११:०० बिहान घर
अस्थायी कर्मचारीहरूको प्रशिक्षणका लागि कागजातहरूको सिर्जना।
११::11० बिहान - १:०० बिहानको यात्रा
XXXXXXXXXXX कम्पनीको लागि नेटवर्क कन्फिगरेसन र सुरक्षा सेटअप गर्नुहोस्।
दूरसंचार सफ्टवेयरको स्थापना।
२:०० बिहान - :14:०० बिहान गृह
१२ व्यक्तिगत ग्राहक मर्मत।
साइटमा हस्तक्षेपका लागि कल ट्रान्सफर।
गतिविधि रिपोर्ट, तपाईंको उपकरणको प्रचार गर्नको लागि आवश्यक उपकरण। अप्रिल th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोSKILLEOS, ई-लर्निंग प्लेटफर्मको साथ रमाईलो गर्न सिक्नुहोस्
निम्नतपाईका इ-मेलहरूका लागि उत्तम विनम्र सूत्रहरू